के अण्डरवियर कपडा नायलॉन राम्रो छ वा पॉलिएस्टर फाइबर राम्रो छ? - समाचार - Beimon बुनाई कपड़ा कं, लिमिटेड
के अण्डरवियर कपडा नायलॉन राम्रो छ वा पॉलिएस्टर फाइबर राम्रो छ?
नायलॉन अंडरवियर कपडामा राम्रो छ।
1. को लगाउने प्रतिरोधनायलॉन कपडासबै प्रकारका कपडाहरूको बीचमा पहिलो स्थान पाउँदछ, समान उत्पादनहरूका अन्य फाइबर कपडाहरू भन्दा धेरै गुणा बढी, त्यसैले यसको स्थायित्व एकदम राम्रो छ।
२ को हाइग्रोस्कोपिकिटीनायलॉन कपडासिंथेटिक फाइबर कपडाहरूको बीचमा उत्तम प्रकार हो, त्यसैले नायलॉनले बनेको कपडा पॉलिएस्टरको कपडा भन्दा बढी लगाउन सहज हुन्छ।
N. नायलन फेब्रिक एक हल्का कपडा हो, जुन कृत्रिम फाइबर कपडाहरूमा मात्र पॉलीप्रोपाईलिन र एक्रिलिक कपडा पछि सूचीबद्ध हुन्छ। तसर्थ, यो पर्वतारोहण कपडा र जाडो को कपडा बनाउन को लागी उपयुक्त छ।
N. नायलन कपडाको उत्कृष्ट लोच र लोभ रिकभरी छ, तर सानो बाह्य शक्ति मुनिको विकृति गर्न सजिलो छ, त्यसैले यसको कपडा लगाउनको बेला झिम्काउन सजिलो छ।
5. नायलॉन कपडाकम गर्मी प्रतिरोध र प्रकाश प्रतिरोध छ। लुगा धुने र मर्मत गर्ने अवस्थामा ध्यान दिनुहोस् र कपडालाई नोक्सानबाट बच्न प्रयोग गर्नुहोस्।
अघिल्लो:त्यहाँ के अण्डवियर कपडा छन्?
अर्को:पौंडी पोशाक ज्ञान: कपडा र सामानहरूको विश्लेषण